Su'aalaha La Weydiiyo | Taizhou Huangyan Longxin Qaab Co., Ltd.
Sideen ku tagaa warshadaada?
Waxaad ku imaan kartaa magaaladayada diyaarad, bas ama tareen.Waxay qaadataa 2 saacadood inaad kaga soo duusho Guangzhou una soo gudubto magaalooyinkeena.Waxay qaadataa 3.5 saacadood inaad ku timaaddo magaaladayaga oo ka timaaddo Shanghai tareen. .
Waa maxay xakamaynta tayada ee warshaddaadu?
Waxaan aaminsanahay in "tayada ay ka sarreyso wax walba". Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo tayada xakameysa. Kooxdayada xakamaynta tayada ayaa inta badan fulisa tallaabooyinka soo socda.
Naqshadeynta naqshadeynta Naqshadeynta B: baaritaanka adkaanta birta caaryada C: tuubbada ku habboon kormeerka isku-dhafka D: Warbixinta baaritaanka caaryada iyo baaritaanka muunadda tuubbada ku habboon E: kormeerka ugu dambeeya ee caaryada iyo xirmada kahor rarka. Haddii aad qabtid su'aalo kale, fadlan si xor ah ula soo xiriir annaga sida soo socota.
Haddii aan ku siiyo sawirada 3D ee sheyga, ma sheegi kartaa oo ma sameyn kartaa caaryo sida ku cad sawirada 3D?
Haa.DWG, DXF, TALLAABO, IGS, iyo faylasha X_T ayaa loo isticmaali karaa in lagu xuso oo lagu sameeyo wasakhahaasi oo ku saleysan qaabkaaga - tani waxay badbaadin kartaa waqti iyo lacag soo saarista qaybo ka mid ah.
Waxaan soo saari karnaa dhammaan noocyada wasakhda wax lagu durayo ee caaga ah, PVC, PPR, PE iyo wasakhda kale ee ku xidha tuubbada. Waxaan kugula talin karnaa tirada ku habboon ee godadka iyadoo loo eegayo cabirka mashiinka wax lagu duro ee la isku duro
By t / T, L / C, dammaanad ganacsi iyo Western Union.
Mudo intee le'eg ayaa waqtiga dhalmadaada ee ku saabsan caaryada?
Ka dib marka la ansixiyo sawirka caaryada, waxay qaadataa 8-12 toddobaad si loo soo saaro caaryada, waxay kuxirantahay qaab dhismeedka caaryada iyo tirada godadka (hal ama dhowr). Taariikhda dirista waxaa laga xisaabin doonaa taariikhda aad ansixineyso sawirkeena caaryada ah. Ka dib markaad xaqiijiso muunadayada ugu dambeysa, waxaan kuu soo diri karnaa caaryada balaastigga ah hal toddobaad gudihiis.